China Vehivavy fonon-koditra vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amina hoditra vita amin'ny dantelina any aoriana Mpanamboatra sy mpamatsy | Fanshen
Fonon-tanana vita amin'ny hoditr'ondry misy hoditr'ondry ao aoriany
Ho an'ny asa, hariva, na fitafiana isan'andro! Ity fonon-tànana ity dia vita amin'ny hoditr'ondry malefaka sy mateza, Tena mahazo aina miaraka amin'ny fametahana sy mora ampiasaina, Mahafinaritra sy mahafinaritra. Ity fonon-tànana ity dia mitafy tsara tarehy mandritra ny taona maro ary hanohy hanompo anao isaky ny vanim-potoana.
Ho an'ny asa, hariva, na fitafiana isan'andro! Ity fonon-tànana ity dia vita tamin'ny hoditr'ondry malefaka sy mateza,Mahazo aina tokoa amin'ny fametahana malalaka sy mora ampiasaina, Toa tsara tarehy sy mahafinaritra. Ity fonon-tànana ity dia mitafy tsara tarehy mandritra ny taona maro ary hanohy hanompo anao isaky ny vanim-potoana.
● Fitaovana: Famonoana Cashmere
● Loko: loko mainty, beige ary loko hafa
Previous: Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy fanjairana mifangaro
Manaraka: Saron-tànana akanjo vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amin'ny fonon-tànana fanidiana
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amin'ny fehikibo hoditra ...
Fonon-tànana fanatanjahan-tena vita amin'ny hoditra vehivavy